‘यात्रा’ को गीतमा साथीभाइको रमाइलो (भिडियो) « Lokpath
‘यात्रा’ को गीतमा साथीभाइको रमाइलो (भिडियो)
प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७५, सोमबार १५:००
काठमाडौं । फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ बाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यु गरेका सलिनमान बानियाँको मुख्य भूमिका रहने फिल्म ‘यात्रा’ को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । निर्माण टिमले युट्युबमार्फत फिल्मको गीत सार्वजनिक गरेको हो ।
गीतमा मेलिना राई, धर्मेन्द्र सेवान, प्रेक्षा बज्राचार्य र उपकार पाण्डेको स्वर छ भने सुजिल कर्माचार्यको एरेन्ज छ । फिल्मका गीतमा संगी र शब्द प्रतीक पौडेलको रहेको छ ।
सम्राट शाक्यले निर्देशन गरेको फिल्म फिल्म नयाँ वर्षको अवसर पारेर चैत्र २९ गते रिलिज हुँदैछ । फिल्ममा सलाने बस्नेत, रियर राई, जाह्नही बस्नेत, मालिका महत, विशाल कटुवाल, धिरेन शाक्य, राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ ।
फिल्ममा कथा र स्किृप्ट निर्देशक शाक्यकै रहेको यो फिल्ममा लगानी सुशील पोखरेलको रहेको छ ।
चलचित्र निर्माता गोविन्द शाही पक्राउ, यस्तो छ कारण
काठमाडौँ । प्रहरीले चलचित्र निर्माता तथा वितरक गोबिन्द शाही प्रक्राउ गरेको छ ।
किन पक्राउ परे ‘लिलिबिली’का निर्माता शाही ?
काठमाडौं । चलचित्र निर्माता तथा वितरक गोविन्द शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
किन आउँदैछिन् सन्नि लियोनी नेपाल ?
काठमाण्डौं । बलिउड अभिनेत्री तथा आइटम गर्ल सन्नि लियोनीले एक भिडियो सन्देश मार्फत
नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ निर्देशक किशोर राना मगरको निधन
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका वरिष्ठ निर्देशक किशोर राना मगरको ६४ वर्षको उमेरमा निधन